Rexroth Suppliers & Warshada | Soosaarayaasha Shiinaha Rexroth
Matoorka Hydraulic waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A2FM63 waxaa loo adeegsan karaa si loogu beddelo moodelkii asalka ahaa ee Rexroth A2FM63. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib.
A4VTG71/A4VTG90HW/32R-NLD10F001S qasiyaha saliidda xamuulka
Bamka saliidda waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A4VTG71 waxaa loo adeegsan karaa in lagu beddelo moodelkii asalka ahaa ee Rexroth A4VTG71. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib.
Bamka Haydarooliga waxaa soo saaray Elephant fluid Power Co., Ltd, oo caan ku ah sumadda Shiinaha. Moodeelka A4VTG90 waxaa loo isticmaali karaa in lagu beddelo nooca asalka ah ee Rexroth A4VTG90. Waxaan leenahay tayada u dhiganta sida tii asalka ahayd, qiimo badan oo tartan ah, gaarsiinta degdega ah, iyo adeegyada ugu fiican ee iibka kadib.